Britain Yokanzura Rwendo Rwayo kuUNWTO neNyaya yeSarudzo
Nyamavhuvhu 08, 2013
WASHINGTON — Britain inoti yave kusendaka parutivi rwendo rwekenda kumusangano we United Nations World Tourism Organization, UNWTO, uyo uri kuitirwa ku Victoria Falls nuZimbabwe, uye muLivinstone kuZambia mukupera kwaNyamavhuvhu.
Vari kuziva zviri kuitika vanoti Britain yatora danho iri nokuti haisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo, idzo dzakanzi nevaongorori vesarudzo vemuZimbabwe, vachitungamirirwa neZimbabwe Elections Support Network, hadzina kuitwa nenzira kwayo.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kumumiriri weBritain muZimbabwe kuti tinzwe zvikonzero zvapa kuti nyika iyi isaende kumusangano weUNWTO.
Asi African Union neSADC dzinoti sarudzo idzi dzaive murunyararo uye dzakachena.
Ukuwo America inoti sarudzo dzemu Zimbabwe dzakanga dzisina kujeka, nokudaro haitambiri zvakabuda musarudzo idzi.
Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica dzakaita seMozambique, South Africa, Kenya, Uganda nedzimwe, vari kukorokotedza mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nekukunda musarudzo idzo dziri kupikiswa mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai nebato ravo, vachitsigirwa nemasangano akawanda emunyika neekunze, pamwe neBotswana.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Bruce Wharton, vanoti America pari zvino iri kumboramba yakaisa zvirango zvayakatemera vamwe vakuru vari muhurumende nekuti haisi kufara nemafambiro akaita sarudzo.
Asi VaWharton vanotiwo havaone hukama pakati peAfrica nenyika dzekumawirira huchinyanya kuipa nepamusana peZimbabwe.
Asi vachitaura nevatori venhau neChitatu mushure memusangano webato ravo, VaMugabe vakati havanei nezviri kutaurwa nenyika dzekunze idzi chero vachitsigirwa nevatungamiri vemuAfrica.
MDC yasvitsa mudare neChina kupikisa kwayo sarudzo zviri pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari chipangamazano muInternational Crisis Group kuchamhembe kwe Africa, VaTrevor Maisiri, vanoti nyaya yeZimbabwe inogona kukanganwika nekuchimbidza vanhu votarisa mhirizhonga kuEgypt neSyria.